ရီဗယျဒိုသားအဖလို ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုတို့သားအဖလညျး တဈသငျးတညျးအတူတှဲကစားခှငျ့ရနိုငျမလား…. သူ့သားရဲ့တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ နောကျနှဈအနညျးငယျအထိ ရျောနယျဒို ဘောလုံးဆကျကစားရဖို့ရှိ – Premier League Special
October 15, 2020 yeminn Article 0
ဆီဆာနဲ့ပျေါလိုမာလျဒီနီ၊ ပီတာနဲ့ကကျဈပါရှမိုကျကယျ၊ ဒနျနီနဲ့ဒါလဘေလငျးစတဲ့ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားသားအဖတှေ စဉျဆကျမပွတျရှိခဲ့ရာမှာ သားအဖနှဈဦး တဈသငျးတညျးမှာ အတူတှဲကစားခှငျ့ရတာဆိုလို့ တျောတျောလေးရှားပါတယျ။ မှတျမှတျရရ ပွောရရငျ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားအဖတှထေဲ ဘရာဇီးတိုကျစဈမှူးကွီး ရီဗယျဒိုတို့သားအဖလောကျ ပဲ တဈသငျးတညျးမှာအတူတှဲကစားခဲ့တာပဲကွားမိပါတယျ။ ရီဗယျဒိုဟာ အသကျ ၄၁နှဈအရှယျမှာ သူ့သား ရီဗယျဒငျညိုနဲ့ ဘရာဇီးကလပျ မိုဂီမီရငျမျအသငျးမှာ ၂၀၁၄ခုနှဈက အတူတှဲကစားခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ရီဗယျဒငျညိုကတော့ အသကျ ၁၈နှဈအရှယျရှိပါပွီ။
ရီဗယျဒိုတို့သားအဖလိုပဲ ခရစ်စတီယာနိုတို့သားအဖနှဈဦးကလညျး တဈသငျးတညျးမှာ အတူတှဲကစားဖို့ စိတျကူးနပေါတယျ။
၂၀၁၉ခုနှဈက ခရစ်စတီယာနိုကိုယျတိုငျက သူတို့သား အဖနှဈဦးအတူတှဲကစားခငျြတယျလို့ပွောခဲ့သလို မကွာသေးခငျက သူ့သားဖွဈသူ ရျောနယျဒိုဂြူနီယာကလညျး သူ့အဖနေဲ့အတူ တှဲကစားခငျြတာကွောငျ့ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားမယူဘဲ ဆကျကစားဖို့ သူ့အဖကေို ပွောထားပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဂြူနီယာဟာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့အသကျ ၉နှဈအောကျအသငျးမှာ ၂၈ပှဲကစား၊ ၅၈ဂိုးသှငျးပွီး၁၈ဂိုးဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ တဈခြိနျမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈလာမယျ့အလားအလာကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားသူဆိုရငျမမှားပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုရဲ့အသကျက အခုတောငျ ၃၅နှဈရှိနပွေီဆိုတော့ သူ့သားနဲ့တှဲကစားဖို့ဆိုရငျအနညျးဆုံး နောကျထပျ ၈နှဈလောကျအထိ ဘောလုံးဆကျကစားဖို့လိုနပေါတယျ။
မကွာသေးခငျက “ကြှနျတေျာ့သားကကြှနျတေျာ့ကိုပွောပါတယျ။ ဖဖေရေေ နောကျနှဈနညျးနညျးလောကျ ဘောလုံးဆကျကစားဖို့ တောငျ့ထားပေးပါဦး၊ ဖဖေနေဲ့အတူ ဘောလုံးကနျခငျြတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ အတူတှဲကစားဖို့ကတော့ခကျခဲမယျထငျပါတယျ၊ သူက ကြှနျတေျာ့ထကျတောငျ ပိုကောငျးတဲ့ကစားသမားဖွဈလာနိုငျမယျ့သူပါ ဒါပမေယျ့ သူ အဲ့ဒါဖွဈဖို့အတှကျတော့ အမြားကွီး ပိုကွိုးစားရအုံးမယျလို့ ကြှနျတျော ထငျတယျ”လို့ ရျောနယျဒိုကပွောပါတယျ။
ပွောစရာတဈခုကတော့ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုဟာ သာမနျဘောလုံးသမားတှထေကျပိုပွီး သူ့ကွံ့ခိုငျမှုကို အာရုံစိုကျလကေ့ငျြ့သူဖွဈတာကွောငျ့ အသကျ ၄၀လောကျအထိ ဘောလုံးသမားဘဝအဖွဈ ဆကျလကျရပျတညျနိုငျခွရှေိပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ရာသီအတှငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျ စီးရီးအမှောအနညျးဆုံး ပှဲ ၃၀ကြျောအထိပါဝငျကစားပေးနိုငျခဲ့တဲ့ သူ့ကွံ့ခိုငျမှုကိုတျောတနျရုံသူနဲ့အသကျတူရှယျတူ ဘောလုံးသမားတှလေိုကျနိုငျဖို့ မလှယျပါဘူး။
ရီဗယ်ဒိုသားအဖလို ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့သားအဖလည်း တစ်သင်းတည်းအတူတွဲကစားခွင့်ရနိုင်မလား….
သူ့သားရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် နောက်နှစ်အနည်းငယ်အထိ ရော်နယ်ဒို ဘောလုံးဆက်ကစားရဖို့ရှိ
ဆီဆာနဲ့ပေါ်လိုမာလ်ဒီနီ၊ ပီတာနဲ့ကက်စ်ပါရှမိုက်ကယ်၊ ဒန်နီနဲ့ဒါလေဘလင်းစတဲ့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားသားအဖတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိခဲ့ရာမှာ သားအဖနှစ်ဦး တစ်သင်းတည်းမှာ အတူတွဲကစားခွင့်ရတာဆိုလို့ တော်တော်လေးရှားပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင် နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားအဖတွေထဲ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးကြီး ရီဗယ်ဒိုတို့သားအဖလောက် ပဲ တစ်သင်းတည်းမှာအတူတွဲကစားခဲ့တာပဲကြားမိပါတယ်။ ရီဗယ်ဒိုဟာ အသက် ၄၁နှစ်အရွယ်မှာ သူ့သား ရီဗယ်ဒင်ညိုနဲ့ ဘရာဇီးကလပ် မိုဂီမီရင်မ်အသင်းမှာ ၂၀၁၄ခုနှစ်က အတူတွဲကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရီဗယ်ဒင်ညိုကတော့ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ရှိပါပြီ။
ရီဗယ်ဒိုတို့သားအဖလိုပဲ ခရစ္စတီယာနိုတို့သားအဖနှစ်ဦးကလည်း တစ်သင်းတည်းမှာ အတူတွဲကစားဖို့ စိတ်ကူးနေပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်က ခရစ္စတီယာနိုကိုယ်တိုင်က သူတို့သား အဖနှစ်ဦးအတူတွဲကစားချင်တယ်လို့ပြောခဲ့သလို မကြာသေးခင်က သူ့သားဖြစ်သူ ရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာကလည်း သူ့အဖေနဲ့အတူ တွဲကစားချင်တာကြောင့် ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားမယူဘဲ ဆက်ကစားဖို့ သူ့အဖေကို ပြောထားပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့အသက် ၉နှစ်အောက်အသင်းမှာ ၂၈ပွဲကစား၊ ၅၈ဂိုးသွင်းပြီး၁၈ဂိုးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာမယ့်အလားအလာကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူဆိုရင်မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အသက်က အခုတောင် ၃၅နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ သူ့သားနဲ့တွဲကစားဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ၈နှစ်လောက်အထိ ဘောလုံးဆက်ကစားဖို့လိုနေပါတယ်။
မကြာသေးခင်က “ကျွန်တော့်သားကကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်။ ဖေဖေရေ နောက်နှစ်နည်းနည်းလောက် ဘောလုံးဆက်ကစားဖို့ တောင့်ထားပေးပါဦး၊ ဖေဖေနဲ့အတူ ဘောလုံးကန်ချင်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အတူတွဲကစားဖို့ကတော့ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်၊ သူက ကျွန်တော့်ထက်တောင် ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်မယ့်သူပါ ဒါပေမယ့် သူ အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ အများကြီး ပိုကြိုးစားရအုံးမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်”လို့ ရော်နယ်ဒိုကပြောပါတယ်။
ပြောစရာတစ်ခုကတော့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ သာမန်ဘောလုံးသမားတွေထက်ပိုပြီး သူ့ကြံ့ခိုင်မှုကို အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်သူဖြစ်တာကြောင့် အသက် ၄၀လောက်အထိ ဘောလုံးသမားဘဝအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရာသီအတွင်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် စီးရီးအေမှာအနည်းဆုံး ပွဲ ၃၀ကျော်အထိပါဝင်ကစားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သူ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုတော်တန်ရုံသူနဲ့အသက်တူရွယ်တူ ဘောလုံးသမားတွေလိုက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။